‘नेतृत्वको सपना देख्नेले आफूमा त्यो गुण विकास गर्न सक्नुपर्छ’
नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) प्रकाश अर्यालले नेपाल प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्व सम्हालेको आज १७ दिन भएको छ । जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले ‘बदर’ गरेपछि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (कासमू) का आधारमा २०७३ चैत २८ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्याललाई सङ्गठनको नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मेवारी दिएको हो । उहाँले प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्व सम्हाल्दै गरेको अवस्थामा सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा अन्याय भएको भन्दै उहाँका एकजना सहयोगी नवराज सिलवाल सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको छ । प्रहरी सङ्गठनको नयाँ नेतृत्वको भावी कामकारबाही, सुरक्षा रणनीति, स्थानीय निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्था र आन्तरिक विवाद समाधानको पहलका विषयमा प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालसँग गोरखापत्रका पत्रकार देवबहादुर कुँवरले गर्नुभएको कुराकानी –
 निकै रस्साकस्सीका बीचमा प्रहरी नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गर्नुभयो, कस्तो लागिरहेको छ ?
रस्साकस्सीभन्दा पनि म यसलाई स्वाभाविक प्रक्रियाका रूपमा लिन्छु । प्रहरी निरीक्षकमा सेवा प्रवेश गरेपछि सङ्गठनको सबैभन्दा माथिल्लो पदमा पुग्ने आकाङ्क्षा सबैमा हुनु स्वाभाविक हो । तर, आकाङ्क्षाले सङ्गठनको नेतृत्व लिने लालचको रूप लिनुहुँदैन । नेतृत्वको सपना देख्ने व्यक्तिले आफूमा त्यो गुण पनि विकास गर्न जरुरी छ । प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशअनुसार नेपाल सरकारले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट रहेको आधारमा मलाई प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सुम्पेको छ । जुन परिस्थितिमा म प्रहरी महानिरीक्षक भएँ, त्यो मेरा लागि अवसर र चुनौती दुवै हो ।
नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर प्राप्त हुन सक्छ भन्ने कुरामा स्वयम् कति विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो ?
मैले आफ्नो प्रहरी सेवाको २९ वर्षसम्म नागरिक सेवामा समर्पित रही नेतृत्व सम्हाल्ने तरिकाले नै कार्यसम्पादन गर्दै आएँ । कर्म गर्ने तर फलको अपेक्षा नगर्ने शैलीबाट मैले सङ्गठनमा आफूलाई दिइएको हरेक जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गरेँ । सायद त्यही व्यावसायिकता एवम् कर्तव्यपरायणताको फल मैले नेपाल प्रहरीको प्रमुख हुने सौभाग्य प्राप्त गरेँजस्तो लाग्छ । यो जिम्मेवारी प्राप्तिका लागि आफू र आफ्नो कार्यशैलीप्रति म पूर्ण विश्वस्त थिएँ ।
प्रहरीको नेतृत्व छनोटमा यस किसिमको विवाद सिर्जना हँुदा सङ्गठनलाई कतिको असर पर्छ ?
प्रहरी महानिरीक्षक पदको नियुक्तिको विषयमा अहिलेमात्र होइन, पहिलेदेखि नै सर्वत्र चासो व्यक्त भइरहने विषय हो । नागरिक समुदायको समेत व्यापक सरोकार रहने विषय भएकाले यस्तो विवादले विभिन्न किसिमको समस्या सिर्जना गर्ने गरेको छ । र, यो पनि सत्य हो कि, यसपटक अलि बढी विषयहरू सतहमा आएका छन् । आम सर्वसाधारणमा समेत यस विषयले महŒव पाएको देखिएको छ । यसलाई मैले सामान्य रूपमा लिएको छु । निश्चित रूपमा हामीजस्तो ‘चेन अफ कमान्ड’ मा चल्ने अनुशासित सङ्गठनमा यसले गम्भीर असर पार्छ । यो नहुनुपर्ने थियो, भयो । यो हामी सबैका लागि एउटा गतिलो सबक पनि हो । अब यस परिस्थितिलाई सम्हालेर थप बिग्रन नदिई व्यावसायिक निष्ठाका साथ अगाडि बढी सङ्गठन बलियो र सुदृढ बनाउनु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिक आउँदै छ, यसलाई सम्पन्न गर्न प्रहरीको तयारी कस्तो छ ?
मैले सङ्गठन प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभन्दा अघिदेखि नै स्थानीय निर्वाचनलाई दृष्टिगत गर्दै प्रत्येक प्रदेश र क्षेत्रअन्तर्गत निर्वाचन ‘डेस्क’ हरूको गठन भई काम कार्य भइरहेको थियो । स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा भइरहेको सुरक्षा तयारी तथा सुरक्षा चुनौतीका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयको आयोजनामा राजधानीलगायत सबै प्रदेशलाई समेट्नेगरी क्षेत्रीय सुरक्षा गोष्ठी पनि सम्पन्न भइसकेको छ । यसबाट आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा हाम्रो तयारी, सुरक्षा चुनौती र आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने रणनीतिक सम्बन्धमा प्राप्त सुझावका आधारमा समयसापेक्ष तयारी हुँदै छ ।
त्यस्तै, गृह मन्त्रालयको अगुवाइमा तयार भएको “स्थानीय निर्वाचन सुरक्षा योजना २०७४’’ ले सुरक्षा निकायलाई आसन्न निर्वाचनमा सुरक्षा निकायको भूमिका तथा कार्यक्षेत्रका विषयमा प्रस्ट दिशा निर्देशन गरेको छ । आगामी निर्वाचनलाई स्वच्छ, शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त निर्देशन एवम् आचारसंहिता पालनासम्बन्धमा समेत हामीले जिम्मेवार ढङ्गबाट काम कारबाही अगाडि बढाइरहेका छौँ ।
स्थानीय निकायको निर्वाचन शान्त र सुरक्षित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने के–कस्तो कार्ययोजना छ ?
गृह मन्त्रालयबाट तयार भएको सुरक्षा योजनाअनुसार नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा नेपाल प्रहरीले विगतका अनुभवलाई समेत स्मृतिमा राखेर निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण वातावरणमा आसन्न निर्वाचन सम्पन्न गराउन ‘सेक्युरेटी स्ट्राटेजी रिभ्यु’ (सुरक्षा रणनीति पुनरावलोकन) गरिरहेका छौँ । झन्डै दुई दशकपछि हुन लागेको यो निर्वाचनमा राजनीतिक दल, मतदाता, नागरिक समाज एवम् आमसञ्चारको समेत सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता रहेको मैले महसुस गरेको छु । निर्वाचन सुरक्षाका केही स्थापित मापदण्ड हुन्छन् । मतदानभन्दा पहिला, मतदानक्रममा, मतदान समाप्त भइसकेपश्चात्, मतगणनाक्रममा र तत्पश्चात् सुरक्षा निकायका जिम्मेवारी के–के हुन सक्छन्, यही सेरोफेरोमा रहेर हाम्रो निर्वाचनको सुरक्षा योजना र कार्ययोजना तर्जुमा भएको छ, जुन अनुरूप सबै कार्य स्वभाविक गतिमा सम्पन्न भइरहेका छन् ।
तपार्इंका भावी योजना र कार्यक्रम के–कस्ता छन् ?
भर्खरै मैले नेपाल प्रहरी सङ्गठनको जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छु । सङ्गठनलाई हाम्रा अग्रजले जुन गति र उचाइ दिनुभएको छ, त्यसको गरिमा अझ उँचो बनाउँदै नेपाल प्रहरीलाई भरपर्दो नागरिक सेवाका लागि तत्पर जिम्मेवार सङ्गठनका रूपमा स्थापित गराउन मेरा समकक्षी साथीहरू एवम् सङ्गठनभित्र व्यापक छलफल विचार–विमर्श गरी छिट्टै कार्य योजना र प्राथमिकताहरू सार्वजनिक गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । अहिले हाम्रो ध्यान निर्वाचनप्रति केन्द्रित छ । अर्को कुरा धेरै आदर्शका फोस्रा कुरा गर्नेभन्दा देखिने र सबैले महसुस गर्नेखालको प्रहरी सेवा र हाम्रो प्रमुख कार्यक्षेत्रका रूपमा रहेको अपराध अनुसन्धानमा दक्ष जनशक्ति र प्रविधि सम्पन्न अब्बल प्रहरी सङ्गठनका रूपमा स्थापित गराउनेतर्फ म क्रियाशील रहनेछु ।
तपार्इंको कार्यकालमा प्रहरी सङ्गठन कस्तो स्वरूपमा हुनेछ ?
नेपालको संविधानको धारा २६८ ले प्रहरीको सङ्घीय स्वरूपको व्यवस्था गरेको छ । मुलुकले ग्रहण गर्ने सङ्घीयताको स्वरूपसँगै हामी पनि आफूलाई कसरी ढाल्ने त्यसको तयारीमा छु । प्रहरी सङ्गठन पनि मानवीय संवेदनायुक्त सङ्गठन हो, ६० वर्ष लामो इतिहास र सयौँ प्रहरी कर्मचारीको बलिदानको यथोचित मूल्याङ्कन, हाल कार्यरत ७२ हजार प्रहरीको भविष्यसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले यससम्बन्धमा व्यापक विचार–विमर्श हुन जरुरी छ र भइरहेको छ ।
नेपाल प्रहरी सङ्गठनलाई कानुनले दिएको जिम्मेवारी “अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रण’’ का लागि गर्नुपर्ने अपरिहार्य विषयवस्तुजस्तै सेवा प्रवाहको स्तरलाई स्तरवृद्धि, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, नागरिकमैत्री प्रहरी सेवा, प्रहरीको आचरण–व्यवहारमा जिम्मेवारीपनको बोध, प्रविधिउन्मुख प्रहरी सेवाजस्ता विषयवस्तुलाई व्यापक रूपमा समेट्ने मेरो सपना छ ।
बेला–बेलामा प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने कुरा आउँछ ? यसमा यहाँको भूमिका कस्तो रहन्छ ?
यो पनि बेला बेलामा उठिराख्ने सवाल हो । जसअनुसार केही ऐनको तर्जुमा आवश्यक छ । सोही तयारीअनुरूप अहिले गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा ‘सङ्घीय प्रहरी ऐन’ बन्नेक्रममा रहेको छ । यसले यी विषयलाई पक्कै पनि सम्बोधन गर्नेछ भन्ने मैले ठानेको छु । राष्ट्रसेवक प्रहरी कर्मचारीका रूपमा नेपाल सरकार र ऐनको प्रावधान जे हुनेछ, त्यसैअनुरूप मेरो भूमिका तोकिने हो । नेपाल सरकारबाट जे–जस्तो प्रावधान आउँछ, म आफूलाई त्यसै दिशामा लैजानेछु ।
अन्य सुरक्षा निकायसँग नेपाल प्रहरीको सम्बन्ध कस्तो छ ? सुधार गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ छन् कि ?
सुरक्षा भन्ने विषय अत्यन्त संवेदनशील र सम्झौता गर्न नसकिने विषयवस्तु हो । यो व्यापक सरोकारको विषय पनि हो । यसमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र सरोकार जोडिएका हुन्छन् । त्यसैले अन्य सुरक्षा निकायसँगको सम्बन्ध, सहकार्य र सहयोग अपरिहार्य छ । नेपाल प्रहरी व्यावसायिक सम्बन्ध र भ्रातृत्वभावमा विश्वास गर्ने संस्था हो । विगतदेखि नै सुरक्षा निकायबीच रहिआएको सौहार्दता, परस्पर सहयोग भविष्यमा पनि निरन्तर रहनेछ भन्ने मेरो अटल विश्वास छ । नेपाल सरकारबाट राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ र सुरक्षा निकायबीचको जिम्मेवारीको हदमा समेत कुनै शङ्का छैन ।
प्रहरीको सरुवा बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेपको गुनासो आउने गर्छ, यसलाई रोक्न के गर्नुहुन्छ ?
यो विषय आफैँमा महŒवपूर्ण र गम्भीर छ । केही भएर नै पक्कै पनि यो विषय बाहिर आएको होला । यो विषयलाई अनावश्यक रूपमा तन्काउनेभन्दा पनि यस विषयलाई गुनासो नआउनेगरी सम्बोधन गर्न पद्धति निर्माणमा जोड दिनु नै यसको सही समाधान हुनेछ । सरुवा, बढुवासम्बन्धमा पहिला पनि नीति र निर्देशिका बनेका छन्, त्यसलाई कसरी थप सुदृढ बनाउने भन्नेमा केन्द्रित रहनेछु ।
राजनीतिक आवरणमा हुने गुण्डागर्दी, दलाली, तस्करी र ठेक्कापट्टा नियन्त्रणका लागि यहाँको प्रयास कस्तो हुन्छ ?
नेपाल प्रहरीले विगत केही वर्षयता गुण्डागर्दी, सङ्गठित अपराधविरुद्ध जुन कठोर प्रहार गरिरहेको छ । यसका लागि मेरा अग्रजप्रति आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि यस्ता आपराधिक क्रियाकलापमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु । राजनीतिक आवरण हुने कुनै किसिमको अपराध प्रहरीका लागि स्वीकार्य छैन ।
मुलुक सङ्घीय स्वरूपमा गएसँगै प्रहरीलाई पनि सङ्घीय स्वरूपमा लैजाने तयारी भइरहेको छ ? प्रहरी सङ्गठन कहिलेबाट सङ्घीय स्वरूपमा जान्छ ?
नेपाल प्रहरीको सङ्घीय संरचनाका सम्बन्धमा गृहकार्य भइरहेको छ । आशा गरौँ, छिट्टै यसले एउटा स्वरूप पाउनेछ । यो नेपाल प्रहरीले भन्दा पनि सरकारले तय गर्ने विषय हो ।
प्रहरी कर्मचारीको आचरण र व्यवहार सुधारका लागि योजना के छन् ?
प्रहरी आचरण र व्यवहार पक्कै पनि नागरिक समाजका लागि अत्यन्त महŒवपूर्ण हुन्छ । प्रहरीको व्यवहारमा सेवाभाव र जिम्मेवारी बोध प्रस्ट देखिनु जरुरी छ । फौजी सङ्गठन भएका कारण हाम्रा समस्त कर्मचारीमा आचरण व्यवहारमा गुनासोरहित हुनैपर्छ । किनभने एउटाको गल्तीले समग्र सङ्गठन सदस्यले आक्षेप बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले विगतदेखि सञ्चालन गर्दै आएको “मुस्कानसहितको प्रहरी सेवा’’, “प्रहरी मेरो साथी’’ कार्यक्रमलाई अझ बढी परिष्कृत गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
नागरिक र प्रहरीलाई आपसमा जति नजिक ल्याउन सक्यो, गुनासो पनि त्यति नै मत्थर हुँदै जानेछ, त्यसका लागि कसरी प्रहरीलाई नागरिकमैत्री बनाउने ? भन्नेतर्फ केन्द्रित छु । साथै नागरिकले प्रहरीलाई पनि केवल विगतको नकारात्मक गतिविधिका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने सोचमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ ।